Siyazi ukuba kuBusika kwaye kuyabanda ngaphandle kodwa uya kukuthanda ukukhululeka kwethu, ukuphumla, ukuzenzela igumbi elinye lokulala, kunye nokufikelela ngasese. Hamba usuku okanye ezimbini okanye ngaphezulu kwihlathi elikhuthazayo okanye uhambo olunxwemeni okanye ujonge indawo entle esemazantsi okanye uziphose kwenye yeebhari ezininzi kunye neeresityu ezifumaneka ukusuka e-East Greenwich ukuya eNewport ukuya eSouth County. Kwaye sikuhambo nje lwemizuzu eli-10 ukuya kwilali eyimbali yaseWickford eneevenkile zayo ezintle, iindawo zokutyela kunye nomtsalane wolwandle.
IMorgan Cottage inokuba kufutshane neProvidence, iyure ukusuka eBoston okanye iiyure ezi-4 ukusuka eNew York kodwa kukude kakhulu nokuphithizela kwezo zixeko. IMorgan Cottage yindawo yokuphumla. Ufuna iintsuku ezimbalwa ukukhaba emva, emva koko, thatha uhambo kwiindlela ezininzi okanye iilwandle ezikufutshane, uzulazule eWickford, eNewport okanye eMpuma Greenwich, utye ukutya okumnandi okanye utye intlanzi kunye neetships ngelixa uhleli esitratweni okanye usenza isidlo ngaphakathi. ikhitshi lakho elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Kwelinye icala ungafuna nje indawo yokumisa ebusuku, kakuhle uMorgan Cottage yeyakho nawe.
Kwaye ibucala njengoko uneyakho indawo yokungena, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala.
4.80 · Izimvo eziyi-387
Ubumelwane bune-rustic, ukanti ungahamba uye eWickford, eWilson Park okanye kwenye yeendawo zokutyela kule ndawo. Ungaqhuba umgama omfutshane ukuya e-Oak Hill Tavern, iPub yakudala egcwele iqokobhe lepeanut ethe saa, i-BBQ kunye nokuzonwabisa okuphilayo.
I'm an Australian artist living with my family in Rhode Island, USA.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo sikufutshane ukuze sikuncede. Kungenjalo mhlawumbi awuyi kusibona.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Kingstown